भारतबाट कोरोना खोप निर्यात बन्द, नेपालले किनेको १० लाख डोज के हुन्छ?
२०७७ चैत्र ३१ मंगलबार
# यूके भेरियन्ट
चैत्र १२, २०७७ ०९:३२ मा प्रकाशित
काठमाडौं । भारतले आफ्नो देशमा उत्पादित कोरोना विरुद्धको खोप निर्यात तत्काललाई रोक्ने भएको छ । कोरोना संक्रमण बढ्न थालेपछि भारतले अक्सफोर्ड–एस्ट्राजेनेकाको कोभिशिल्ड खोप अन्य देशलाई नदिने निर्णय गरेको भारतीय विदेश मन्त्रालय स्रोतलाई उद्रत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ । यद्यपी कोभिशिल्ड उत्पादन गर्ने सेरम इन्स्टिच्यूटले यसबारे केही बोलेको छैन ।
मन्त्रालयका अनुसार संक्रमण बढेसँगै आफ्नै देशमा खोपको माग बढ्नसक्ने भएकाले निर्यात नगर्ने निर्णय भएको हो । भारतले अप्रिलको अन्त्यसम्म निर्यात नगर्ने जनाइएको छ । भारतको यो निर्णयले कोभ्याक्सको योजना अनुसार खोप वितरणमा असर पुग्नेछ । करिव १९० वटा देशमा कोभिशिल्ड नपुग्ने देखिएको छ ।
अहिलेसम्म भारतले ७६ देशमा ६ करोड मात्रा खोप दिइसकेको छ । बुधबार ४७ हजार नयाँ संक्रमित देखि भने २७५ जनाको मृत्यु भयो ।
भारतले निर्यातमा रोक लगाएसँगै नेपालमा पनि यसको प्रभाव पर्ने देखिएको छ । सिरम इन्स्ट्च्यिूटसँग खोप किन्न ८० प्रतिशत रकम पठाइसकेको भएपनि आउन बाँकी १० लाख मात्रा खोप समयमा नै उपलव्ध गराउन नसक्ने जवाफ दिएको बताइएको छ ।
तर स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले भारतले जे निर्णय गरेपनि नेपालमा खोप आउने दाबी गर्नुहुन्छ । हेल्थपाटीसँगको कुराकानीमा उहाँले आफुहरुले चाँडै खोप ल्याउन पहल गरिरहेको र छिट्टै नै खोप आउने बताउनुभयो ।
बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखा प्रमुख डा. झलक शर्मा गौतमले नेपालमा खोप अभियान चल्दा १८ लाख व्यक्तिले पहिलो मात्रा लगाएको जानकारी दिनुभयो । तर ५ लाख खोप मात्रै मौज्दात रहेको उहाँले बताउनुभयो । मौज्दात खोप अनुसार स्वास्थ्यकर्मीलाई मात्रै दोस्रो मात्रा पुग्ने देखिएको छ ।
अन्य देशलाई कोरोना खोप नदिने
अप्रिलको अन्त्यसम्म निर्यात नगर्ने
कोरोनाको हटस्पट बन्दै विद्यालय, अस्पताल भर्ना हुनेमा अधिकांश शिक्षकहरु
सरकार आज स्वास्थ्यसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड जारी गर्दै
भारतमा पछिल्लो २४ घण्टामा १ लाख ६० हजारमा संक्रमण
अत्यावश्यक सेवामा खटिएकालाई आजदेखि चिनियाँ कम्पनीको खोप लगाइँदै
ट्रमा सेन्टरमा ड्युल इनर्जी एक्स रे, एब्सोपिटोमेट्री लगायत सुविधा जडान
बढ्यो कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या,एकै दिन १३ जनाको मृत्यु
ह्ववात्तै बढ्यो कोरोना संक्रमित, ५५९ जनालाई कोरोना पुष्टि
शिक्षण संस्था बन्द नगर्न सुझाव